Ikhaya leHolide elinamagumbi okulala ama-3 eHemsedal Skisenter - I-Airbnb
Ikhaya leHolide elinamagumbi okulala ama-3 eHemsedal Skisenter
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguAnders
Ikhabhinethi ibekwe kufuphi nomlambo i-Hemsila, ukuya kwindawo ye-ski malunga neemitha ezingama-500, kwaye ibhasi ye-ski imisa endleleni edlula iikhabhini. Ukuya kumbindi wesixeko malunga neekhilomitha ezi-2, kodwa ngaphakathi kwendawo yokutyibiliza unokufumana iindawo zokutyela, iibhari, iivenkile kunye nevenkile yokutya.
Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi lalungiswa ngo-2019.
-Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulukazi.
-2. igumbi lokulala linebhedi ene-120cm, kunye ne-90cm.
-3. igumbi lokulala libekwe kumgangatho we-2 kwaye lineebhedi ezimbini (120 cm kunye ne-90 cm).
** Singathanda ukurenta ikhabhathi kubantu abangaphezulu kweminyaka engama-30, kunye neentsapho **
Uya kufumana ikhabhinethi njengoko uthatha indlela ephumayo ye-RV52 usiya eHemsedal Skisenter. Emva kokuwela ibhulorho, thatha indlela yokuqala ukuya ngasekhohlo, uze uhlale ekhohlo kwindawo yendlu encinane ebizwa ngokuba yiMølla Hyttegrend. Ikhabhini yeyokuqala kwicala lasekhohlo, inani lama-220.
Ikhabhinethi imalunga ne-50 m2 kumgangatho ophambili, kunye nomgangatho wesibini owongezelelweyo kubandakanya indawo yokulala (Iibhedi ezimbini, i-120 cm kunye ne-90cm), kunye nendawo yeTv enesofa.
Kukho ukufudumeza kuyo yonke imigangatho kumgangatho ophambili, kwaye igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi lalungiswa ngexesha lasehlotyeni nasekwindla ye-2019.
Kumgangatho ophambili kukho amagumbi amabini okulala. Igumbi lokulala elinye linebhedi elingana nokumkani (160cm), kwaye igumbi lesibini linebhedi ene-120cm, kunye ne-90 cm.
Ikhitshi inazo zonke izixhobo eziyimfuneko ezifana ne-dishwasher, umenzi wekofu, kunye nezinye izixhobo zasekhitshini. Kwiikhabhathi zethu zasekhitshini kwezinye iindawo uya kufumana izinto ezizezethu, asikhathali ukuba uyayisebenzisa, kodwa nceda uphinde ugcwalise ukuba kukho nantoni na engenanto (iphepha langasese, iziqholo, ipasta, ukucoca izinto njl njl). Oku kusekelwe ngokupheleleyo kwintembeko. Kukwakho nepani yomlilo yangaphandle, ukuba ungathanda ukupheka isidlo sangokuhlwa ngaphandle. Uya kufumana kwakhona i-ski-booth ngaphandle apho zonke izixhobo zangaphandle kufuneka zibekwe. Iibhutsi zokutyibiliza nezinye izihlangu akufunekanga zisetyenziswe ngaphakathi ngaphandle kwaseholweni. Uya kufumana izixhobo zokucoca kunye nezinto ezinjalo kwi-cottage encinci phantsi kwezitebhisi.
Singathanda ukurenta ikhabhinethi yethu kubantu abanoxanduva abangaphezulu kweminyaka engama-30 kunye neentsapho. Ummandla wekhabhinethi ugcwele iintsapho ezinabantwana abancinci, kwaye kulindeleke ukuba kungabikho mbhiyozo okanye ingxolo yokulayisha emva kwe-23:00, kuquka neempelaveki. Akuvumelekanga ukutshaya ngaphakathi, kwaye izilwanyana zinokwamkelwa xa ziceliwe. Kufuneka uze neebhedi zakho kunye neetawuli. Oku kunokuqeshwa ngeHemsedal Sevice Team AS ngeendleko ezongezelelweyo ze-175, - NOK ngomntu ngamnye.
Umbuki zindwendwe ngu- Anders
Bor i Oslo, hytte i Hemsedal.